Apple ID ပြုလုပ်နည်း ~ သန်းတိုးအောင် နည်းပညာမှတ်စု
Apple ID ပြုလုပ်နည်း
IOS, နည်းပညာ No comments
Apple ID ဆိုတာ Apple ကပေးတဲ့ service တွေကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ account တစ်ခုပါ။
iTunes Store က music တွေ application တွေဝယ်ချင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် iCloud ကိုအသုံးပြုဘို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် Apple ID တစ်ခုရှိထားဘို့လိုပါတယ်။
(1) အောက်ပါ Link ကိုသွားပါ။
(2) Choose an Apple ID and password.
Apple ID နေရာမှာ email address ကိုထည့်ပေးပါ။ email address ကို Apple ID အဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
Password ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ အနည်းဆုံး စာလုံးအကြီးတစ်လုံးနဲ့ number တစ်လုံးပါရပါမယ်။
Confirm Password နေရာမှာ password ကိုထပ်ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
(3) Createasecurity question.
နှစ်သက်ရာ security question တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး answer ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ သူပေးထားတဲ့ question တွေမသုံးဘဲ စိတ်ကြိုက် question လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ answer ကိုမှတ်ထားရပါမယ်။ password မေ့သွားတဲ့အခါ security question ကို ဖြေပေးရမှာမို့ပါ။
(4) Select your birth date.
မွေးနေ့ကိုဖြည့်ရပါမယ်။ အမှန်မဖြည့်ရင်တောင် ဖြည့်ထားတဲ့ မွေးနေ့ကိုမှတ်ထားရပါမယ်။ password မေ့သွားတဲ့အခါ password ကို reset ပြန်လုပ်ဘို့ကြိုးစားရင် အရင်ဆုံး မွေးနေ့ကိုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မှန်မှ security question ကိုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေးထားတဲ့မွေးနေ့ကိုမှတ်ထားဘို့လိုပါတယ်။
(5) Enter your name.
Full Name, Middle Name and Last Name တွေရိုက်ထည့်ပါ။ Middle Name ကတော့မထည့်လည်းရပါတယ်။
(6) Enter your primary address.
Country/Region မှာ မြန်မာနိုင်ငံမပါတဲ့အတွက် အခြားတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါ။
Company/Institution ကိုထည့်ပါ။ မထည့်လည်းရပါတယ်။
Address Line 1 မှာ တစ်ခုခုထည့်ပေးလိုက်ပါ။
Address Line2ကတော့ ထည့်ချင်လည်းထည့် မထည့်ချင်လည်းရပါတယ်။
State/Province မှာလည်း တစ်ခုသာရွေးပေးလိုက်ပါ။
Zip Code မှာလည်း number တစ်ခုခုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
(7) Please type the characters you see in the image below.
အထက်ပါ စာကြောင်းဘယ်ဘက်ဘေးက Check Box မှာ အမှန်ခြစ်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
(9) ပြီးရင် Create Apple ID ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
(10) သင်ပေးထားတဲ့ email address ရဲ့ inbox မှာပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ Apple ID ကို ဒီ email address နဲ့လုပ်ထားပါတယ်။ verify လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့ mail တစ်စောင်ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Verify ဆိုတဲ့ Link ကို Click လိုက်ပါ။
(11) Verify လုပ်ပြီးရင် Apple ID ကို create လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ref Mobile Mother
TTA App များစုစည်းမှု